BRW emulsion mgbapụta ojii - China Tianjin Longtop Mining
BQS (BQW) Mining mgbapụta
JPB usoro akpụcha winch
Pneumatic ụlọ Bolter
Pneumatic nkume malite ịgba
BRW emulsion mgbapụta ojii
BRW usoro m emulsion mgbapụta ngwaahịa iwebata
BRW usoro m emulsion mgbapụta ojii bụ tumadi na-enye elu nsogbu emulsion maka Ngwuputa ihu, dị ka ndị ike isi iyi nke haịdrọlik nkwado na Itie nke na-arụ ọrụ ihu ebu. BRW usoro emulsion mgbapụta ojii na-emi esịnede abụọ emulsion mgbapụta na a ụfọdụ ụdị emulsion igbe; haịdrọlik ike isi iyi bụ elu-ọkwa general Ngwuputa na-arụ ọrụ ihu nke coal m otu haịdrọlik prop na ụba na ụdị zuru ezu ígwè ọrụ ihu haịdrọlik support. N'ihi na ihe ezi uche Ọdịdị, a pụrụ ịdabere na arụmọrụ, adaba mmezi, nabatara ndị ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ.
BRW usoro m emulsion mgbapụta akporo
BRW usoro m emulsion mgbapụta ojii na-eji na-arụ ọrụ dị iche iche mines, mba-agbachitere, ọwara na ọwara. Tumadi maka coal ihu, tunneling igwe na elu nsogbu emulsion, nwere ike izute general Ngwuputa ihu, n'ụzọ zuru ezu ígwè ihu dị iche iche chọrọ. Automatic mmiri mmiri, mgbapụta overpressure akpaka ebutu, emulsion ịta ruru nwere ike gbanwere kpamkpam, nwere uru nke mgbanwe na ime ihe, adaba ije, oru oma, ike-azọpụta, na nchekwa, corrosion eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, nnyefe anya na otú ahụ. Dị ka ndị ahịa ina nwere ike n'ụzọ na agụụ electro magnetik Starter, mberede mgba ọkụ, na accumulator.
BRW usoro m emulsion mgbapụta Ọdịdị iwebata
BRW usoro m emulsion mgbapụta bụ a kwụ ise plunger reciprocating mgbapụta, nke mobile ọdụ, na-ike a ga-eji maka idozi na pumping ojii. Nke a mgbapụta a na-chụpụrụ site na a atọ-adọ AC kwụ larịị Anọ gbawara-àmà asynchronous moto, ọsọ reducer mere ndị crankshaft bugharia, na crank ejikọta mkpanaka usoro ụgbọala na plunger reciprocating ngagharị, nke mere na-arụ ọrụ nke mmiri mmiri site na mmiri , iyuzucha valvụ mmiri na-agbapụta n'ahụ, nke mere na eletriki ume haịdrọlik ike, mmepụta elu nsogbu mmiri mmiri maka na-arụ ọrụ nke haịdrọlik support. Onwem na elu nche na akpaka onwe ukpụhọde nke valvụ nke elu nsogbu mgbapụta orùrù tinyekwa, ka hụ na ndị a pụrụ ịdabere haịdrọlik usoro. Na ojiji usoro, ịkpachara anya mmezi na mmezi, iji hụ na nkịtị ọrụ nke pumping ọdụ, ọdụ dị ka eji chọrọ nke ọrụ, na dị iche iche ike Motors, a dịgasị iche iche nke mgbali etoju. N'ihi na elu nāmiputa ọrụ n'elu nwere ike ahazi atọ imipu abụọ igbe.
BRW usoro m emulsion mgbapụta ojii isi oke
Previous: KJ3.5LM egwuputa Oriọna
Next: K-S30 Oxygen Self anapụta
1.5kw Submersible mgbapụta
22kw Submersible submerged mgbapụta
Bq High Pressure mgbapụta
Centrifugal submerged mgbapụta
Centrifugal Submersible mgbapụta
Deep Ọfọn submerged mgbapụta
Deep Ọfọn Submersible mgbapụta
Electric Immersible mgbapụta
Electric submerged mgbapụta
Ọdụdọ Deep Ọfọn submerged mgbapụta
MD centrifugal mgbapụta
Pneumatic Diaphragm mgbapụta
Submerged centrifugal mgbapụta
Submerged Circulation mgbapụta
Submerged Slurry mgbapụta
Submerged Vetikal Akwụsịla mgbapụta
Submersible submerged mgbapụta
Vetikal submerged centrifugal mgbapụta
Vetikal submerged mgbapụta